Izidlo - Ukupheka zokupheka | Ukupheka izindlela zokupheka (Ikhasi 7)
Isaladi ebandayo yespaghetti, iresiphi enempilo kuleli hlobo
Kulesi sihloko sikunikeza umbono wokuqalisa ukudla kuleli hlobo ngaleli saladi elibandayo le-spaghetti elinamaqanda abilisiwe, i-tuna ne-ham.
I-Tarte Tatin enamapheya nesinamoni, i-dessert emnandi
I-Tarte tatin iyi-classic yokubika yaseFrance. Sikukhombisa izinyathelo zokwenza ikhekhe elimnandi lepheya nesinamoni
Izindwangu ezenziwe ekhaya, zilungele idina lezingane
Kulesi sihloko sikufundisa ukuthi ungakwenzela kanjani ukudla okuthandayo izingane, ama-nuggets, kulokhu okunempilo, ukukhohlwa ngokudla okuthosiwe nokudla okungenamsoco.
Izinkukhu zifakwe ama-aergergine kusoso lamakhowe
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani ama-aergergines agcwele inkukhu kusoso lamakhowe, uzomangala ukuthi amnandi kanjani.
I-Strawberry ne-banana smoothie, isidlo esiqabulayo futhi esinomsoco
Sikukhombisa indlela yokwenza i-strawberry ne-banana smoothie elula, isiphuzo esiqabulayo futhi esinomsoco, esilungele ukudla okulula kwezingane.
Inkukhu skewers ngemifino, ekhethekile ngesidlo sasebusuku sothando
Kulesi sihloko sikunikeza umbono omuhle wesidlo sothando nezikhukhu zenkukhu ezine-pepper, u-anyanisi notamatisi we-cherry.
I-rice pudding, i-dessert entsha yokushisa kwalezi zinsuku
Kulesi sihloko sethula i-dessert emnandi eyenziwe ngaphambili, i-rice pudding, i-dessert esha kakhulu kulezi zinsuku zokushisa okukhulu.
Amazambane awosiwe kuhhavini ngokugqoka okuhambisana nososeji wesoseji
Kulesi sihloko sikunikeza umbono osheshayo wokwenza iresiphi namazambane. Uzothanda le recipe yamazambane athosiwe futhi ngeke kukuthathe isikhathi eside ukukwenza.
Iresiphi yeRatatouille, eqala isonto ngemifino emihle
Kule ndatshana sethula iresiphi enhle kakhulu ye-ratatouille, emnandi ukuqala ngalo Msombuluko.
I-puree yamathanga nama-croutons, yawo wonke umndeni
I-pumpkin puree iyinhlangano yekhalori ephansi yendabuko, isidlo sokuhlanza. Hlanganisa namanye ama-croutons ashubile futhi ujabulele nomndeni wonke.
Amakhukhi we-chocolate ne-Maria, i-dessert esheshayo
Sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani i-chocolate ne-biscuit flan, i-dessert ewusizo kakhulu ozoba nayo ngomumo ngemizuzu engu-15.
I-pizza pan, enye iresiphi yokusetshenziswa
Kulesi sihloko sikulethela ama-pizza amnandi epani enziwe ngesinkwa esidala nezinsalela zezinye izitsha, indlela yokusebenzisa konke okusekhishini.
Isobho i-la olla, iresiphi eyisipuni eyenziwe ngugogo-gogo
Kulesi sihloko sikukhombisa iresiphi yezinsuku zakudala, isobho ebhodweni, lapho ugogo-mkhulu asebenzise khona isinkwa esidala nomhluzi osembizeni.
Ama-burger amnandi amnandi agcwele ama-burger
Kulesi sihloko sikufundisa ukuthi ungawenza kanjani ama-hamburger ajwayelekile ngenye indlela enamanzi, ama-hamburger agcwele ushizi.
Ama-muffin we-Cream, amathenda futhi athambile kakhulu
Ama-muffin we-Cream ayinto yakudala ezindabeni, ukulunywa okungenakuphikiswa kwasekuseni noma ukudla okulula.Sikukhombisa isinyathelo esilula ngesinyathelo!
Amaqanda agxishwe ama-paprika
Sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani amaqanda amnandi agxishwe ama-prawn. Iresiphi elula futhi emnandi kakhulu ngokuthinta okulula kwe-paprika.
Irayisi lesobho elinamahlumela, iresiphi yendabuko evela kumama nogogo
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi emnandi yesobho lelayisi ngama-clams njengoba kwenza umama wami nogogo wami.
Amazambane acubuziwe gratin, ukuhambisana okuhle
Sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani amazambane ama-gratin acubuziwe, alungele ukuhambisana nenyama nenhlanzi futhi ilungele izingane
Inkukhu kagalikhi, isidlo esihle kakhulu esinamakhaza amnandi
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi yenkukhu enhle kakhulu. Ilungele abadli abathanda ukudla okubabayo.
Inkukhu, i-ham ne-béchamel croquettes, ukuluma okungu-10
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungalungisa kanjani ama-croquette enkukhu, ham ne-béchamel. Iresiphi enhle yokujabulela isidlo sakusihlwa.
Ngabe uzolungisa isidlo? Kuthiwani ngamanye ama-muffin e-almond okuzenzela? Kokupheka Ukupheka sikutshela ukuthi ungazilungiselela kanjani.
IMusaka yenyama ne-zucchini, iresiphi yokuyijabulela kule mpelasonto
Kule ndatshana sikunikeza umbono wokuthi uthokozele ulwanga kulezi zinsuku ukuthi amaholidi aphelile ngale nyama ne-zucchini musaka.
Amakhukhi e-chocolate aqhekekile, isilingo sangempela
Sikukhombisa igxathu negxathu lokwenza le iresiphi elula yamakhukhi kashokoledi, amakhukhi abonakala ngokuqhekeka kwawo
Okuzenzela ushizi flan, uzoyithanda
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani i-dessert eyenziwe ngokwenziwa ushizi omnandi. I-dessert emnandi elingana nanoma iliphi itafula.
Upelepele wePiquillo ogcwele i-bechamel, i-Easter ekhethekile
Kulesi sihloko sikunikeza umbono ngePhasika, lawa ma-pepper we-piquillo agcwele inyama nge-béchamel. Kuhle!
Isinkwa se-Arabhu Kulula kakhulu!
Ukwenza isinkwa sama-Arabhu kulula kakhulu futhi nangeresiphi esikulethela yona namhlanje uzoyithola ngokuqinisekile. Ungaphuthelwa !.
Ama-muffin kashokolethi namantongomane, akhethekile kulo Lwesihlanu nasekuqaleni kwamaholide
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani ushokoledi omnandi namamfinathi wenathi. Okukhethekile ukugubha amaholide e-Easter.
Amaqanda aqotshiwe namazambane athosiwe, alungele isikhathi lapho kukhona udokotela
Kulesi sihloko sikukhombisa isisombululo esihle kakhulu ngalezo zinsuku lapho singenaso isikhathi sokupheka. Amaqanda amnandi ahlikihliwe namazambane athosiwe.
Izinkukhu zesibindi nelayisi, umthombo omnandi wensimbi
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi elula kakhulu egcwele izakhi zomzimba ezinjenge-iron. Ezinye izibindi zezinkukhu ezimnandi ngesidlo sasemini.
Ikhekhe, ikhekhe le-mocha noshokoledi
Le iresiphi ephelele yezinsuku zokuzalwa kanye nemibuthano yomndeni; ikhekhe elenziwe kalula, elinga bhakwa, elinga bhaka, elenziwe ngoshokoledi nekhekhe le-mocha!
Isaladi le-Bud elinesigqoko sesinaphi kanye noju
Ukushintshashintsha nokungaziphindi kakhulu kubalulekile ekhishini. Namuhla sikukhombisa isaladi ehlukile, ngokugqoka okumnandi kwe-moztaza noju.
Amazambane amabhola agcwele inyama noshizi
Kulesi sihloko, sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi emnandi yabancane, amanye amabhola amazambane agcwele inyama, bazowathanda.
Spaghetti ngeminqumo emnyama, iresiphi elula futhi engabizi
Iresiphi elula ihlale iwukunqoba ekhishini, kepha uma futhi ingabizi futhi ingeyokuqala, kungcono. Ungaphuthelwa yile iresiphi yespaghetti ngeminqumo.
Inyama ephekiwe ne-tomato sauce
Sikukhombisa indlela elula yokusebenzisa inyama ephekiwe oyisebenzisela ukulungiselela umhluzi. Inyama ephekiwe enososo wotamatisi.
I-pasta enamakhowe we-basil
I-pasta enamakhowe we-basil, isidlo esilula, esilula futhi esimnandi ngokulinganayo.
I-mushroom sauce, isidlo esihlwabusayo eseceleni
Sikukhombisa ukuthi ungasenza kanjani isosi yamakhowe esihlwabusayo ongahamba ngayo nesosi yakho noma izitsha zenyama. Ilungele ngemizuzu engama-30.
Inkukhu isitshulu nama-artichokes nophizi
Sikukhombisa ukuthi ungasenza kanjani isitshulu senkukhu esimnandi ngama-artichokes nophizi, isitshulu esiphelele sokondla wonke umndeni.
Amakhukhi e-Almond, isidlo esisheshayo nesilula
Sikukhombisa ukuthi uwakha kanjani amakhukhi e-almond amnandi okwe-snack, okulungele ngemizuzu engama-30!
Inkukhu ethosiwe nge-marinade, ubumnandi bonkulunkulu
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi enhle yenkukhu ethosiwe ku-adobo sauce. Ukunambitheka okuhle kwanoma iyiphi i-barbecue.
I-octopus yaseGalician, isitshudeni esingu-10
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungasenza kanjani isidlo esijwayelekile saseGalician. Le recipe yeGalician octopus ithathwa njengesinye sezitsha ezihamba phambili.
I-spaghetti enenkukhu, ushizi nebhekoni, isebenzisa izithako
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi yespaghetti ngenkukhu, ushizi nebhekeni. Indlela yokusebenzisa ngokunenzuzo izithako ezizophelelwa yisikhathi.
I-puree yemifino nesaladi elixubekile, isidlo sakusihlwa kwababili
Kulesi sihloko sikufundisa ukuthi ungayenza kanjani i-puree yemifino nesaladi exubekile yesidlo sakusihlwa ukwanelisa leyo ndlala onayo ekupheleni kosuku.
Ingulube ethambile ne-anyanisi nopelepele oluhlaza
Sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani ithenda yengulube emnandi nge-anyanisi we-semi-confit kanye ne-piemiento eluhlaza.
Ama-meatballs enkukhu, omndeni wonke kubandakanya nezingane
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi enhle kakhulu yenkukhu yenyama yenkukhu. Inconyelwe wonke umndeni, ikakhulukazi izingane.
Uphaya wamazambane abilayo nenyama, okhethekile ngesidlo sasebusuku sothando
Kulesi sihloko sikunikeza leli khekhe lezambane kanye nenyama eligayiwe, ukugubha usuku lokuzalwa noma ukumangala nje ngesidlo sasebusuku sothando.
Izimfanzi zika-Garlic, i-tapa elula yokwenza
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi elula kakhulu neyendabuko, amanye ama-prawns ka-garlic amnandi futhi anongiwe, kulabo abathanda okubabayo.
I-timbale yemifino namazambane acubuziwe neqanda
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi elula, i-kettledrum yemifino enamazambane namaqanda acubuziwe.
Amafrimu wesinamoni we-Apple
Sikukhombisa iresiphi ephelele yokuqalisa ekubhakeni, amanye ama-apula nesinamoni amnandi futhi athambile. Kulula futhi kuyashesha!
Ama-aergergine ane-cottage shizi, ukujabulela ngoSuku Lwezithandani
Sikukhombisa iresiphi ephelele yokumangaza lolu suku lwezithandani, ama-Aubergines ane-cottage shizi. Idina elula futhi esheshayo enesethulo esihle.
I-cheesecake nojamu we-sitrobheli, i-dessert ekhethekile yosuku lwezithandani
Kulesi sihloko sizokufundisa indlela yokwenza ikhekhe loshizi nojamu we-sitrobheli ukuze uzokwenza umlingani wakho athandane futhi ngoSuku Lwezithandani.
Ama-meatballs enkomo ku-sauce yaseSpain
Sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani ama-meatballs nge-sauce yaseSpain, isoso elizophinde lihambisane nenye inyama.
Izithelo ezifudumele nesaladi
Izithelo ezifudumele nesaladi zilungele umcimbi okhethekile. Uphayinaphu nemango kwenza inhlanganisela enkulu yalesi saladi
Ama-pancake ane-apple compote, i-dessert yomkhosi
Namuhla sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani ama-pancake amnandi nge-apple compote, iresiphi yendabuko yaseGalician yokugubha iCarnival.
I-mushroom risotto, iresiphi ephelele ka-Valentine
Iresiphi elula ye-mushroom ne-mushroom i-risotto ongayidla nenkampani enhle. I-risotto yokudlela, emnandi futhi emnandi
Izindlebe ze-Carnival, iresiphi ejwayelekile yomkhosi ovela eGalicia
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungazenza kanjani izindlebe ezimnandi zeCarnival noma i-Entroido Orellas, iresiphi ejwayelekile evela eGalicia futhi emnandi kakhulu ngokudla okulula.
Ama-toast obisi olujiyile abhakwe, akhethekile kuCarnival
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi emnandi yeCarnival. I-toast yobisi efingqiwe ebhakwe, iresiphi elula kakhulu futhi elula.
Amazambane a la Riojana, isitshulu sendabuko
Sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iPatatas i-la Riojana, isitshulu sendabuko esinothe kakhulu ekunambithekeni, esifanele ukulwa nezinsuku ezinamakhaza kakhulu.
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani amabele amnandi agcwele i-ham noshizi. Lesi sidlo sihle kakhulu ezinganeni zakho, zizosithanda.
Sikukhombisa iresiphi yalezi zinkwa zesinkwa, ama-alimondi noshokoledi ongazisebenzisa ngokunenzuzo ngesinkwa esidala. Isidlwana esilula futhi esihlwabusayo.
Kulesi sihloko, sikukhombisa ukuthi ungasenza kanjani isitshulu senyama enhle namazambane, iresiphi enhle enikeza amandla amaningi nokushisa emzimbeni ngesikhathi sokubanda.
Ukuzenzela amaqanda okuzenzela, injabulo emnandi yalolu Lwesihlanu
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi ejwayelekile eyenziwe ngokwendabuko eyenziwe ngeqanda. Le dessert ihlala ithandwa kakhulu yizingane.
Amadombolo ama-tuna kanye namaqanda, akhethekile ezinganeni
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani i-tuna eyenziwe ngokwenza kanye namadombolo amaqanda. Le recipe ihle kakhulu ukuqondisa izingane ukuthi zidle imifino.
Ispaghetti esine-chorizo ​​nokhilimu, enye indlela yokupheka i-pasta
Kulesi sihloko sikukhombisa i-spaghetti esimnandi nge-chorizo ​​nokhilimu, iresiphi enhle yespaghetti enokunambitheka okuhle kweSpain.
Amazambane asikiwe ngebhekoni nezinongo, isidlo sakusihlwa ngemizuzu engu-15
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi yamazambane asikiwe ngebhekoni nezinongo. Ukudla okusheshayo ngemizuzu eyi-10, pop kubo! Uzoyithanda.
Ama-croquette ama-Shrimp ne-coriander
Ama-croquette ama-Shrimp ne-coriander, iresiphi ecebile yama-prawn nephunga le-coriander elizobamba ama-diners. Esihlwabusayo kakhulu futhi elula.
Inyama lasagna Bolognese
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani i-lasagna Bolognese yenyama, ejwayelekile e-Italy kepha ngokuthinta kwayo kwaseSpain.
Inkukhu enama-alimondi, isidlo se-10
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungasenza kanjani isidlo esikhulu senkukhu ngama-alimondi. Iresiphi elula, ngenkathi imnandi. Ngikumema ukuba uzame.
I-Roscón de Reyes eyenziwe ekhaya
Iresiphi yokwenza i-roscón de Reyes eyenziwe ekhaya njengokuyalelwa yisiko. I-roscón ejwayelekile enezithelo eziswidi nama-alimondi asikiwe. Iresiphi yempilo yonke.
Ikhekhe lesipanji sepentshisi (ngaphandle kweqanda)
Namuhla ekuphekeni Ungadliwa sikulethela iresiphi yekhekhe elimnandi lesiponji elingenamaqanda!. Ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokudla okulula kwezingane.
Isitshulu sikagogo esinama-croutons
Lapha sikufundisa ukuthi ungayenza kanjani imbiza kagogo ojwayelekile, iresiphi enhle yesisu yokuphumula ngaphambi kokudla okweqile.
Imiqulu yemifino enoshizi
Iresiphi yamarowu yemifino noshizi, okumnandi nge-snack noma ukuhambisana nezinye izitsha. Ungayihambisa nesaladi noma inkukhu ethosiwe
I-spaghetti ene-zucchini nesitshalo seqanda
Namuhla ekuphekeni Ungadliwa sikulethela isidlo esilula nesiphundu: Ispaghetti esine-zucchini nesitshalo seqanda.
I-volvovan yamakhowe eneqanda lesigwaca
Iresiphi yamakhowe, intaba-mlilo yamakhowe enamaqanda agwaca alungele ama-tapas noma ukuphelezela ukudla nezivakashi
Isobho lenhlanzi elinama-noodle, elakhiwe kabusha ngemuva kwamaholide
Kulesi sihloko sikufundisa ukuthi ungayenza kanjani isobho lenhlanzi elifanele izinsuku lapho ukudla kube nzima kakhulu esiswini sethu.
I-Turkey isitshulu nemifino
Iresiphi yaseTurkey enemifino, isidlo esinempilo kakhulu futhi esihlwabusayo ukugcina ukudla. Lesi sitishi se-turkey sinambitheka.
I-turkey ehlanganisiwe, iresiphi kaKhisimusi
Stuffed turkey recipe, isidlo esijwayelekile sikaKhisimusi esine-prunes, amabhilikosi omisiwe namantongomane ephayini Iresiphi ichazwe ngokuphelele ngendlela elula futhi imnandi
Isaladi laseRussia, limnandi ngama-tapas
Lapha sikukhombisa iresiphi ejwayelekile cishe wonke umuntu owaziyo ukuthi angayenza kanjani, isaladi elimnandi laseRussia, esingalidla nganoma yisiphi isikhathi.
Izimbambo ezigazingiwe nephunga le-basil, ezihlwabusayo futhi ezilula kakhulu ukuzilungisa
Izimbambo ezigazingiwe, ngaphezu kokuba zihlwabusayo, ziphilile kakhulu, ngoba zinongwe kuphela ngamafutha ne-basil, nokunye okunye.
Isaladi enemibala eminingi, isidlo sasemini esine-pasta enempilo kakhulu
Lapha sikukhombisa iresiphi yesaladi enemibala eminingi ukuze ulahlekelwe yilelo kilos elengeziwe esihlala silifuna kulo Khisimusi nangoNcibijane.
Ama-croquette enkukhu amancane, idina elihle labancane
Kulesi sihloko sikufundisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani noma iyiphi inyama esele ukwenza ama-croquette akhethekile enkukhu abancane.
Ubhontshisi obuluhlaza ngeqanda nebhekoni, isidlo sakusihlwa esinempilo
Namuhla sikukhombisa iresiphi enempilo yobhontshisi obuluhlaza ngebhekeni neqanda. Lokhu kubalulekile ekukhuleni kwezingane, ngakho-ke ... zama!
Ama-Meatballs ku-sauce isidlo esiphelele kakhulu futhi esilula ukulungiselela, esilungele amadina, ikakhulukazi uma kunezingane.
Izihlathi ze-veal ku-Porto sauce
Iresiphi elula futhi enempilo ye-veal e-Porto sauce. Izihlathi ze-veal zithandwa yiwo wonke umuntu futhi zizonqoba emcimbini okhethekile.
Iresiphi yezinhlanzi nezilwandle zasolwandle ezothandwa yiwo wonke umuntu. Le iresiphi elula yezinhlanzi ilungele lezi Khisimusi, usuku lokuzalwa nezikhathi ezikhethekile
I-tuna empanada, iresiphi emnandi yokusebenzisa imifino
Kulesi sihloko siphakamisa iresiphi ye-tuna empanada, iresiphi emnandi yokusebenzisa imifino. Kungumqondo omuhle, zizame!
Ama-artisan mantecados, ama-dessert kaKhisimusi 3
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani ama-ayisikhilimu obuciko, i-dessert ejwayelekile kaKhisimusi. Kuyinto iresiphi efanelekile yedina esilindele manje.
Amaqanda aqhephukile aziwa kakhulu imvamisa ubhontshisi noma amakhowe, phakathi kwabanye. Namuhla kuma-Cooking Recipes sikutshela ukuthi ungakwenza kanjani nge-zucchini.
Ikhekhe lokuzalwa nokhilimu khekhe noshokoledi
Lapha siyakumangaza ngaleli khekhe lokuzalwa, elinokhilimu khekhe noshokoledi. Umbono omuhle ezinganeni futhi, kungani kungenjalo, hhayi izingane.
Izithelo isaladi: uphayinaphu, umango, i-persimmon, i-sitrobheli, i-blueberry, noma izithelo zonyaka ezihambelana nathi kangcono. Le recipe izothokozisa wonke ama-diners
Inyama yenkomo eyindilinga enemifino
Iresiphi eyindilinga enemifino, enempilo futhi enempilo. Iresiphi esheshayo futhi elula ezosiza ekusetshenzisweni kwemifino kuwo wonke umndeni
Ama-truffle e-chocolate ngezinyathelo ezintathu
Iresiphi yokwenza ama-truffle eshokoledi ngezinyathelo ezintathu ezilula. Sikukhombisa indlela elula yokwenza ama-truffle eshokoledi, indawo yokudlela yezivakashi
Ushokoledi owenziwe ekhaya kanye ne-almond nougat, uphudingi kaKhisimusi 2
Lapha sikunikeza iresiphi ejwayelekile kaKhisimusi: i-chocolate ne-almond nougat eyenziwe kithi. Ngikholwe ukuthi uzoyithanda!
I-tuna cannelloni, isidlo esimnandi se-pasta kuwo wonke umuntu
Lapha sikukhombisa iresiphi emnandi ye-tuna cannelloni. Umqondo omuhle wokupheka i-pasta ngendlela yokuthi bonke abadlayo bayamangala.
Ikhekhe loyogathi, lokudla okungaqinisekisiwe
Lapha sikukhombisa indlela esheshayo yokwenza ikhekhe leyogathi lokudla okulula nabangani abafika ekhaya kungalindelekile. Kuyimpumelelo.
Ikhekhe lesiponji ngemizuzu emi-5
Ukwenza ikhekhe akukaze kube lula kangako: Sifaka zonke izithako enkomishini, hlanganisa naku-microwave! Wena onesibindi?
Ama-sandwich agcwele, isidlo sakusihlwa esihle sabangane
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani amasamishi aphelele, alungele umhlangano nabangane.
Ama-bouillon cubes azenzele
Esikhundleni sokusebenzisa amaphilisi we-bouillon akhiwe ngomumo, ucabangani uma sizenzela ama-bouillon cubes ethu? Kulula, kunempilo futhi kuyimvelo.
Ukulondolozwa okuzenzela, kumnandi kakhulu futhi kulula ukwenza
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani i-custard eyenziwe ngokwenza okumnandi kalula. Ngiyethemba niyazijabulela.
Izimbambo zezinyosi zezinyosi
Izimbambo zeWundlu ezinobusi, iresiphi elula neyangempela ongamangaza ngayo izivakashi zakho.
Ukhilimu we-khekhe, ukugcwalisa zonke izinhlobo zama-dessert
Iresiphi yokwenza ukhilimu we-khekhe, ukhilimu odume kakhulu ukwenza zonke izinhlobo zama-dessert. Thola ukuthi ungenza kanjani ukhilimu we-khekhe omuhle kakhulu ngesinyathelo nangendlela elula.
Ama-burger enkomo azenzele wona kusoso obabayo
Lapha sikufundisa ukuthi ungawenza kanjani ama-hamburger amnandi futhi enziwe ekhaya ukuze ubalekele 'ekudleni okusheshayo'.
I-Exotic Inkukhu neCinnamon Saladitos
Umbono omuhle wokudla okulula - kulula futhi kushibhile. Ama-plums nesinamoni kuzonikeza ukuthinta okungajwayelekile okuzokwenza ama-saladitos ethu anganqandeki.
I-Pink Lactonese noma i-Pink Milk Sauce (ngaphandle kweqanda)
I-lactonese epinki, isoso elibomvana elinobisi oluhle olusebenza njengokuhambisana nezitsha eziningi. Ngaphezu kwalokho, ukungabi neqanda, ukulondolozwa kulula
I-spaghetti carbonara esheshayo kodwa esihlwabusayo
Kulesi iresiphi sizokufundisa ukuthi ungapheka kanjani i-spaghetti carbonara esimnandi kalula futhi ngokushesha. Ngiyethemba niyazijabulela.
Ama-prawn amasha aphekiwe
Indlela elula yokupheka ama-prawn amasha. Uma udinga izimfene eziphekiwe futhi azikho emakethe, lapha ngichaza indlela elula yokuwapheka
Ama-lentile ane-chorizo, umqondo omuhle walokhu kubanda
Lo mbhalo ukhombisa iresiphi ejwayelekile yokudlulisa amakhaza asebusika, amanye ama-lentile amnandi ane-chorizo. Zithokozise wena!.
Izibopho zezingulube zasendle
Izibopho zezingulube zasendle ku-balsamic uviniga sauce kanye namantongomane ephayini kanye nezithelo zomvini
Izihlathi ze-Puff pastry
Izihlathi ezinamakhowe ezisongwe nge-puff pastry
Ukupheka nge-tajine kulula kakhulu futhi kwamukela cishe noma yisiphi isithako, imvamisa bavame ukuba nenyama noma inhlanzi, kepha kulokhu ...
Ubhekeni kanye noshizi osanda kufakwa ama-meatballs. Iresiphi yama-meatballs agcwele ushizi agcwele ukudla okuphezulu kwamaprotheni
I-zucchini egxotshiwe nge-Shrimp
I-zucchini egxishwe imfucumfucu, iresiphi yokudla kwasolwandle egxishwe zucchini. Uzomangaza wonke umuntu ngalezi zucchini ezinempilo futhi ezihlwabusayo ezinama-prawn.
Isobho seCastilian (isobho likagalikhi)
Isobho le-Castilian (isobho likagalikhi), iresiphi ejwayelekile evela enyakatho yeCastilla y León esekwe kuma-breadcrumbs nogalikhi. Icebo ukuwubilisa.
Amakhukhi angama-Eggless Chocolate
Sisanda kubona amakhukhi kashokoledi, athambile futhi alungele ukuhamba nengilazi yobisi. Labo ...
Amakhukhi eshokoledi athambile
Amakhukhi okuzenzela ahlala enqoba futhi, uma enziwe ngoshokoledi, aba ngcono. Lawa makhukhi athambile futhi acebile kepha awana ...
Isobho lenhlanzi elingabizi
Isobho lenhlanzi elicebile akudingeki ukuthi libize! Thola ukuthi ungayenza kanjani enguqulweni yezomnotho.
Indebe kalamula efriziwe enesisekelo se-caramel kanye ne-peanut topping
Inkukhu isaladi nge-pink sauce
Akukho okungcono ukudla kahle kunesaladi enhle enenkukhu nemifino, ukwenza ukudla kwethu kube umlingani ohamba phambili.
Unogwaja kusoso lukaphayinaphu
Uma uyithanda inyama, akukho okungcono kunokwenza le recipe ngososo lukaphayinaphu, ngoba imnandi futhi ilula.
I-watermelon jelly enezithelo eziqoshiwe
I-watermelon jelly enezithelo eziqoshiwe, i-dessert elula ezosiza izingane zidle izithelo eziningi
Utamatisi skewers ngeqanda neham
Sikukhombisa ukuthi ungawakha kanjani ama-skewers amnandi ngezithako ezilula ukuze ukwazi ukuwalungisa nganoma yisiphi isikhathi.
Uphayinaphu, ubhanana nophuthu lwamabhisikidi
Lapha sikukhombisa namhlanje i-dessert emnandi ukuze abantu abadala nezingane bakwazi ukuthola izithelo ngezindlela ezahlukahlukene.
Isaladi lesipinashi, iresiphi ephelele yesidlo semifino enokuqukethwe okuphezulu kwamavithamini futhi enezinto eziningi ezibalulekile ekudleni kwethu
Isifuba esisisiwe esinopelepele notamatisi
Lapha sikukhombisa isobho elimnandi elinemifino nenyama yabathandi bokudla okuhle, ukuze ufunde izitsha ezintsha.
Isaladi ye-Watercress enezinti zasolwandle kanye nama-avocado
Isaladi le-watercress elinomsoco futhi elisha elinama-avokhado, izinti zolwandle nama-apula, lihlotshiswe ngoju no-mustard
Ubhanana no-ayisikhilimu kakhukhunathi
I-dessert efriziwe enebhanana ne-yoghurt kakhukhunathi, iresiphi emnandi kabhanana no-ayisikhilimu kakhukhunathi wesizini eshisayo. Izonambitha okumnandi!
Imvu yoju enama-plums
Iwundlu lezinyosi elinama-plums, iresiphi yangempela ehlanganisa ukunambitheka okumnandi nosawoti
I-Cherry, ikhabe ne-apricot smoothie
Iresiphi elula neqabulayo ye-cherry, ikhabe ne-apricot smoothie. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela lesi sibiliboco esimnandi.
Potato, tuna kanye ikhukhamba tapa
Iresiphi ecebile futhi esheshayo yamazambane, i-tuna kanye nekhukhamba tapa. Ake sibone inqubo elula yokujabulela lesi sibiliboco esimnandi.
I-Turkey ifaka i-béchamel gratin
Iresiphi elula necebile yama-turkey fillets ane-béchamel gratin. Ake sibone igxathu negxathu elilula lokujabulela ubumnandi.
I-Churrasco ne-pepper sauce
Iresiphi elula necebile ye-churrasco nge-pepper sauce. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi nokulungiselelwa kwawo.
I-Scalding gratin, iresiphi elula ukuyilungisa futhi ecebe kakhulu, elungele uma ufisa ukudla kwakusihlwa okulula
Imifino esayishiwe ene-tuna ne-soy sauce
Iresiphi elula futhi esheshayo yemifino esikiwe ene-tuna ne-soy sauce. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela iresiphi.
Inkukhu enophayinaphu noju lwesosi
inkukhu enophayinaphu onoshukela omuncu, omuncu, uju kanye ne-sauce emhlophe yewayini
Isinkwa sikabhanana esilungiselelwe nge-powder baking, iresiphi ejwayelekile yaseMelika, uzobona ukuthi ibukeka kanjani
Isaladi nge-melon ne-ham
Isaladi ne-melon ne-ham embhedeni wamahlumela e-ulethisi ahlukahlukene anama-pickle neminqumo emnyama.
Isaladi ngama-artichokes noshizi
Isaladi lehlumela elincane elinama-artichokes, ushizi, utamatisi neminqumo emnyama
Iresiphi elula necebile yama-croquette enziwe okuzenzela. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi.
Amabhisikidi (noma ama-lollipops wekhekhe lesiponji)
Amabhisikidi ayindlela yokupheka enqoba njalo phakathi kwabancane, futhi kulula kakhulu ukuyenza!
Isaladi ngoshizi nama-walnuts
Isaladi ngoshizi nama-walnuts, iresiphi ehlukile kepha kulula kakhulu ukuyijabulela ehlobo
Ama-apula acwilisiwe ushokoledi
Ushokoledi ocwiliswe i-apula, iresiphi elula yezingane
Iresiphi elula yama-muffin kalamula. Lawa ma-muffin alungele ibhulakufesi noma isidlo esilula ngenkomishi yobisi noma asakazwa nebhotela
ICrostata ene-medlar jam
Ikhekhe elibhakwe eligcwele ujamu we-medlar owenziwe ekhaya.
Ikhekhe loshizi likaMascarpone elishaywe ngama-strawberry futhi limbozwe nge-jelly.
Amakhekhe ngekhofi neyogathi
Iresiphi elula yekhekhe nekhofi neyogathi. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela iresiphi.
Ubhanana othosiwe ngokhukhunathi
I-dessert kabhanana ethosiwe efudumele enokhukhunathi ogayiwe, ushokoledi, ukhilimu, noma i-dulce de leche nama-ayisikhilimu ahlukahlukene.
Isaladi lezinkukhu nophayinaphu
I-ulethisi isaladi nesipinashi nama-arugula amahlumela anenkukhu, uphayinaphu kanye nama-walnuts.
Ubhanana omncane waseFrance
Iresiphi elula necebile yama-banana torrijas amancane, nesinamoni. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi.
Ubhanana othosiwe nge-caramel
Ukulungiswa okunambitheka okumnandi, ubhanana othosiwe nge-caramel. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi.
Utamatisi, ushizi kanye ne-basil crostinis
Isinkwa esithosiwe ngamafutha, sifakwe utamatisi, ugarlic, ushizi nebasil ngeminqumo emnyama.
Izimbaza zeProvençal ewayinini emhlophe ezihambisana namafriji aseFrance
Imifino e-Crispy enoshizi wezimbuzi
Inhlama yezitini e-Crispy efakwe isipinashi noshizi wembuzi.
Izibopho zenyama yenkomo ezigoqiwe, ezifakwe i-ham, ushizi neminqumo e-sauce enkulu yewayini elibomvu.
Intambo egcwele ukhilimu we-khekhe, ama-walnuts kanye nama-raisin. Iresiphi yekhekhe eligcotshisiwe le-Easter lokudla kwasekuseni noma isidlo esinekhofi elimnandi.
Utamatisi omusha noshizi tapa
Utamatisi omusha noshizi tapa, iresiphi elula katamatisi noshizi yanoma yimuphi umcimbi ongalindelekile. I-tapa eqabula kakhulu futhi ekahle ehlobo
Utamatisi utamatisi ozenzele
Isoso setamatisi esenziwe ekhaya esisebenza njengokuhambisana ne-omelette yesiFulentshi, ama-meatballs athile, amaqanda athile azingelwe noma ezinye izinketho eziningi
I-Alfajores yempuphu yommbila ene-dulce de leche kanye nekakhukhunathi.
Amakhowe agcwele iminenke ebhotela ngegalikhi, iparsley no-anyanisi.
Puff khekhe nge apula
Iresiphi yama-apula we-caramelized ngesisekelo se-puff pastry.
Izinkukhu zamabele ezinamakhowe kokhilimu nasesinaphi.
Izitshalo zamaqanda eMilanese
Iresiphi yama-aergergine enesinkwa ukuze idle i-gratin ebhakwe noma isemishi elimnandi lemifino.
Amabele ahlanjululwe kuviniga nebhalsamu
Iresiphi elula yebele elihlanjululwe kuviniga nebhalsamu. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi nokulungiselelwa kwawo.
Izitokisi zeklabishi ezihlanganisiwe
Iresiphi elula yezikhwama zeklabishi ezigxishiwe, ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi.
I-ulethisi nesaladi lekhukhamba elinokugqoka okungu-3 ongakhetha kukho
I-pasta enososo we-bechamel namaqanda aqhekeziwe
I-pasta enososo lwe-béchamel namaqanda agayiwe, iresiphi emnandi ye-pasta ezokwaziswa nganoma isiphi isidlo, i-pasta ene-béchamel imnandi
Namuhla ngicabange ngesidlo sakusihlwa sababili. Sizolungisa i-sirloin ngama-plums, engicabanga ukuthi kuzoba imenyu ...
Ama-skewers enyama nemifino
Namuhla sizolungisa ama-skewers, isidlo esilula kakhulu esine-skewering ukudla okwehlukahlukene okusikwe kwaba yizicucu ...
Sizolungisa isoso leBolognese esingalisebenzisa ukuphelezela ipasta, ukugcwalisa i-cannelloni, ama-pizza, njll. Le recipe ayi ...
Iresiphi elula yesipinashi esuswe ngeqanda. Ake sibone igxathu negxathu ukuze sijabulele lesi sibiliboco esimnandi.
Ukholifulawa nge-bechamel sauce
Namuhla sizolungisa ipuleti ukholifulawa namazambane. Ukholifulawa imifino esiyidla kancane yize iyi ...
I-Strawberry smoothie, iresiphi elula ye-smoothie enezithelo zemvelo. Izingane ziyazithanda lezi zokupheka lapho zingaziboni khona izithelo nabantu abadala nazo!
Namuhla sizolungisa iresiphi yama-fritters aphefumulelwe ama-guenilles noma ama-bugnes alungiselelwe ugogo wami ngoLwesibili ...
I-Sobrasada skewers ngopelepele nesoseji
Iresiphi elula yama-sobrasada skewers ngopelepele nososeji. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi.
I-banana puree enamakhukhi nobisi
Iresiphi ye-banana puree enamakhukhi nobisi. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi.
Inyama emsizeni wemifino
Inyama e-sauce yemifino, iresiphi yenyama ehamba kahle kakhulu nelayisi elincane noma amanye amafries aseFrance
UPalmeritas De Hojaldre
Ama-chips e-puff pastry alungele ukudla okulula. Njengoba zilula kangaka ukuzilungiselela, ungazenza nganoma yisiphi isikhathi ...
Isipinashi noshizi quiche
I-Quiche efakwe isipinashi, ushizi we-Emmental neqanda elishaywe ngoshizi we-quark nokhilimu.
Ishaya Indlebe Ingulube
Iresiphi yendlebe yengulube eshaywayo. Elula futhi emnandi, ake sibone igxathu negxathu ukuze sikujabulele.
Isaladi eliyisisekelo, ukuhambisana okunempilo kunoma yisiphi isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa. Le iresiphi yesaladi ingumqondo omuhle
I-Skewer yeSinkwa Esikiwe ne-York ne-Cheese
Iresiphi elula yesinkwa esisikiwe nge-york noshizi. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi.
Isanqante isobho nge-mint
Isobho lesanqante neqanda elifakwe iminti
UJijona Nougat ngokunciphisa iRatafia
I-nougat elula futhi esheshayo ene-Ratafia ukunciphisa. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela le recipe elula.
Upelepele osikiwe, ukuhlobisa okuhle kwenyama noma kwenhlanzi. Ungayihambisa nelayisi noma isaladi
Izithelo isaladi nejusi le-apula
Izithelo zesaladi ngejusi le-apula, isidlo esilungile. Le iresiphi yesaladi lezithelo inamavithamini amaningi neminikelo ethokozisayo
Inkukhu Fillet enesoso saseMadroños
Iresiphi elula ye-chicken fillet ne-strawberry sauce. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ukulungiswa kwaso nokunambitha.
I-Bell pepper sauce (ye-pasta)
I-sauce esiphundu neshibhile ye-pepper ye-pasta. Ngalesi iresiphi yesosi khekhe uzophumelela ngaphandle kokungabaza etafuleni
Ulimi Lenkomo Namazambane neBlack Butifarra
Iresiphi elula esuselwa olimini lwenkomo, amazambane nososeji omnyama. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi.
Ukuhlobisa ipea likagalikhi, iresiphi ejwayelekile yepea, ukudla okumnandi nokulula kwanoma yisiphi isenzakalo
I-caramelized anyanisi sauce kanye namagilebhisi omisiwe
I-caramelized anyanisi sauce kanye namagilebhisi omisiwe ama-meatballs, inyama, inhlanzi, njll. Iresiphi emnandi yanoma yisiphi isenzakalo.
Inkukhu Macerated nge Canarian Adobo
Iresiphi elula yenkukhu ethosiwe nge-Canarian adobo. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela lesi sibiliboco esimnandi, esizosishiya sinambitheke okhethekile.
I-Wok Yemifino Esikiwe
I-wok yemifino ekhonjiwe, iresiphi yaseChina enempilo kakhulu enamaprotheni amaningi namavithamini. Uma uthanda imifino al dente zama, uzobona ukuthi imnandi kanjani
Ubhontshisi ohlaza okotshani
ukosa kabhontshisi oluhlaza, iresiphi elula futhi enempilo
Ukuhlanza umhluzi ngokugcinwa koketshezi
Iresiphi yokuhlanza umhluzi ngokugcinwa koketshezi
Amazambane nenyama yenkomo Millefeuille
Iresiphi elula yamazambane millefeuille nge-veal. Isinyathelo esilula kakhulu ngesinyathelo lapho sizobona khona inqubo yokukucacisa.
Sizolungisa i-apple compote emnandi, ake sibone igxathu negxathu ukujabulela iswidi enhle kakhulu.
Ama-noodle anemifino, kulula ukwenza, asheshayo futhi anemiphumela emihle.
Amadombolo enyama egayiwe (kuhhavini)
Amadombolo enyama egayiwe enziwe kuhhavini + enguqulweni yemifino nevegan
Izingulube Zengulube ezine-Prawns ne-Scampi
Iresiphi yokulungisa izihlathi zengulube ngama-prawn kanye ne-scampi. Kulula ukulungiselela futhi okumnandi kulwanga. Ngaphandle kokuqhubeka okunye, ukuthanda ukudla.
Ungayivimba kanjani i-pasta ekunamatheleni
Icebo elilula ukuze ipasta inganamatheli, uyayenza yini ipasta iyanamathela? Lapha sikukhombisa ukuthi ungaqinisekisa kanjani ukuthi i-pasta ayinamatheli
Amakhowe Asuté anenyama egayiwe
Iresiphi esetshenzisiwe enamakhowe nenyama egayiwe. Ukulungiselela okulula komphumela okhethekile. Ake sibone igxathu negxathu.
Isaladi lesanqante lesi-Arabhu
Isaladi lesanqante laseMorocco, iresiphi ejwayelekile kakhulu yase-Arabhu evela eMorocco. Ungakubeka njengokuhambisana nanoma iyiphi inyama noma inhlanzi futhi kunempilo kakhulu
Izinyawo zengulube ezinama-prawn
Iresiphi ecebile yezinyawo zenyama yengulube enama-prawn, elula futhi emnandi, sizobona igxathu negxathu ukujabulela le recipe.
Isanqante nokhilimu we-zucchini
Isanqante nokhilimu we-zucchini, iresiphi elula yokulwa namakhaza asebusika
IKefta tajine, isidlo sendabuko saseMoroccan, iresiphi ejwayelekile kakhulu yama-Arabhu yalawo mazwe, kubukeka njengama-meatballs ethu futhi muhle kakhulu
I-Sautéed Zucchini ene-anyanisi, iziphazamisi nokuthinta amakhambi
Imifino eceke kakhulu, ene-zucchini, u-anyanisi nezimbungulu, iresiphi efanelekile yalabo abathanda imifino, ngokuthinta amakhambi. Ake sibone igxathu negxathu.
Imifino Egcwele Izitshalo Zeqanda
ama-aergergines agcwele imifino, iresiphi elula kakhulu futhi emnandi yokudla okunempilo
I-braid emnandi nemifantu
i-braid emnandi nama-brioches, iresiphi emnandi ongayithanda ngesidlo sasekuseni, isidlo noma nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Ngejamu encane iyanambitheka
I-insalata di pasta al pomodoro fresh e basilico (isaladi le-pasta elinotamatisi no-basil omusha)
Insalata di pasta al pomodoro e basilico, isaladi le-pasta ngotamatisi ne-basil. Isaladi elula kakhulu futhi entsha yase-Italy kulezi zinsuku ezishisayo
Ngivame ukupheka okuthile okumnandi futhi angazi nje ukuthi kwenzekani kimi ngalezi zinhlobo zokupheka. Noma iyiphi iresiphi ...
Iklabishi nesanqante isaladi
Ihlobo liyanyamalala kancane kancane kanye nezindlela zokupheka ezintsha, kepha akukho okusivimbela ekucingeni kakhulu ...
Inyama egayiwe Omelette
Iresiphi ye-omelette yenyama egayiwe. Ekhethekile kodwa emnandi, sizobona igxathu negxathu ukuyenza.
Ama-veal Burgers anemifino
Iresiphi elula yama-veal burger anemifino. Njengenjwayelo sizobona igxathu negxathu ukuzenza futhi sikwazi ukujabulela lesi sibiliboco.
Amabele Ezinkukhu Ebhakiwe Ngezinongo
Namuhla sizozama ukuthinta ngokukhethekile isifuba senkukhu, ukwenza kube lula ukudliwa. Siyethemba ukuthi kuyasebenza, ake sibone igxathu negxathu.
Isinkwa esigcwele imifino nenyama egayiwe
Namuhla ngikulethela isinkwa esimnandi esigcwele imifino nenyama egayiwe eyethulwe ngesimo sokuluka, ihlala iphumelela!
UQuince noBacon Skewer
I-bacon skewer iresiphi ene-quince, enoshukela nosawoti ngokulunywa okufanayo. Kulula futhi kumnandi. Ake sizame ukukucacisa.
Amaqanda agxishwe ushizi omusha neminqumo
Namuhla ngikulethela i-appetizer esha sha, emnandi futhi yethulwe kahle: Amaqanda agcwele ushizi omusha neminqumo.
Inkukhu enezinkukhu namakhowe
Iresiphi yenkukhu ene-prawn namakhowe. Elula futhi emnandi, ake sibone igxathu negxathu.
Amakhekhe we-Zucchini nge-Cheese
Iresiphi yama-skewers e-zucchini ngoshizi, okhethekile futhi onambitheka okumnandi. Ake sibone igxathu negxathu.
Ijusi lepentshisi lemvelo
Ngezinsuku ezishisayo, ujusi wemvelo opholile kakhulu ungaba wusizo kithina ukuphuza amanzi nezithelo. Lapha ngikushiya ijusi elipholile kakhulu lepentshisi.
I-yogurt enoshukela ne-Banana
I-yogurt ekhaliphile eneresiphi kabhanana, elula neqabulayo ukuyenza, ekahle ehlobo.
Amakhukhamba aseSpain aqoshiwe
Iresiphi yekhukhamba yaseSpain eqoshiwe. Ukunotha nokunempilo kuyindlela enhle yokulungisa le mifino, ngoba iyisibiliboco esihle uma isentsha ehlobo.
Petit pois a la française (noma uphizi waseFrance)
Uphizi waseFrance, iresiphi yendabuko evela eFrance enezithombe ngesinyathelo ngesinyathelo, okulula ukwenziwa, ezinama-calories aphansi futhi ezingabizi kakhulu.
Izakhiwo ze-Apple (nesmoothie ukusizakala ngazo)
Isihlahla se-apula singesinye sezihlahla zezithelo ezilinywa kakhulu emhlabeni jikelele nezithelo zaso, i-apula, esinye se ...
Utamatisi othosiwe nge-White Cheese
Utamatisi oboshwe ngeresiphi emhlophe ushizi. Elula, enempilo futhi emnandi. Ake sifinyelele ekuchazeni kwayo.
Ukholifulawa onenkukhu nama-mushroom Curry
Iresiphi kaCauliflower enenkukhu namakhowe curry. Kulula futhi kunempilo ukukwenza, sizobona izinyathelo zokukujabulela.
Inkomo Ossobuco enamakhowe
Iresiphi ye-Ossobuco ye-veal enamakhowe, elula futhi emnandi, kanye neyasekuqaleni. Sizobona igxathu negxathu ukulichaza.
Ama-Veal Rolls Agcwele Amakhowe
Iresiphi yama-Veal Rolls agcwele amakhowe, iresiphi elula futhi enelukuluku lokuyijabulela futhi umangaze abanye.
Isaladi Utamatisi Omisiwe
isaladi utamatisi omunyiwe, izindlela zokupheka ezihlwabusayo, ezilula futhi ezinempilo kakhulu. Le iresiphi yesaladi inikeza amavithamini amaningi abalulekile usuku nosuku
Inkukhu yomzala enemifino
Umzala wenkukhu onemifino, isidlo sendabuko saseMoroccan esimnandi. Ngale iresiphi yomzala ngeke uzisole, ngiyakuqinisekisa ukuthi uzophumelela
Inkomo, Inkukhu Namazambane kuSoso Sauce
Iresiphi yenkomo, inkukhu namazambane ku-soy sauce. Elula futhi ethinta i-Asia, isinikeza izinhlobo eziningi zokunambitheka.
Amaqanda aqhephukile anesipinashi ngeqanda ne-Garlic
Isipinashi saqhekeza amaqanda ngeqanda neresiphi yeresiphi Kulula ukwenza futhi ucebile. Njengoba ibuye ifihle ukunambitheka kwesipinashi.
Isaladi lamazambane ehlobo
Isaladi lamazambane asehlobo, elihlwabusayo futhi elilula kakhulu, elaziwa nangokuthi isaladi lezwe. Ngaphezu kokulula, kubuye kube isidlo esonga kakhulu
Ubhontshisi Ohlaza okotshani onama-mushroom Bolognese
Iresiphi yobhontshisi obuluhlaza ngamakhowe iBolognese. Elula futhi enempilo ukuyilungisa, isidlo esiphelele.
Inkukhu Curry nemifino
Iresiphi yenkukhu curry nemifino. Ilula futhi inempilo. Ngaphezu kwalokho, lezi zinhlobo zingumlingani wokudla.
Njengoba ngihlala ngisho, unogwaja uyinyama enempilo futhi kulula ukuyilungisa ngakho-ke masikwenze, masenze unogwaja omnandi ngegalikhi.
Isobho likaZu "Zucchini" eliphindwe kabili: Iphilile futhi ilula kakhulu!
Amakhrim ayindlela enhle yokudla imifino. Ungaphuthelwa yilokhu ukhilimu we-zucchini, olula futhi ofanele ukudla.
Inyama yenkomo ebanjiwe enamakhowe nama-Peas
Inyama yenkomo ebunjiwe iyindlela yokupheka yendabuko futhi namhlanje sizoyenza ngamakhowe nophizi. Kuyindlela elula yize ezinye izinyathelo zingaba nzima.
I-Mushroom Tapa eneQuail Egg
Ukuqala emhlabeni we-tapas kuhle njalo. Futhi namhlanje ngikulethela iresiphi ecebile yokwenza i-tapa eyingqayizivele, yamakhowe aneqanda lezigwaca.
Upelepele Ugcwele Imifino Namakhowe
Iresiphi enempilo futhi elula ukuyilungisa. Olunye upelepele obugcwele imifino namakhowe. Isibiliboco esiphundu esizosisindisa ebukhosini.
Ubhontshisi obuluhlaza obushubile obune-Garlic Encane Namakhowe
Indlela ehlukile yokudla imifino, ubhontshisi omnandi osuswe ngegalikhi namakhowe. Ukuthinta okukhethekile nokunempilo. Ukulungiselela kulula futhi akudingi ukunakwa okuningi.
Iresiphi yaseRussia turkey fillet iyindlela elula yokulungisa i-burger yendabuko. Futhi impela kunempilo kunalokho osekulungiselelwe.
I-Sautéed Zucchini enamakhowe
Pheka ngokushesha futhi unempilo, asikwazi ukucela lutho olunye. Kuthatha nje isifiso esincane bese kuthi konke okunye kuvele ngokwakho. Impilo ibalulekile ngakho-ke masiyinakekele.
Unogwaja Obhakiwe Ngezinongo
Iresiphi elula kanogwaja obhakwe nezinongo. Kuyinto ebabazekayo ekudleni futhi kulula futhi ukuyinonga ngezinongo noma ezinye izinto. I-crunchy imnandi.
ILa Mona de Pascua iresiphi ejwayelekile yezinsuku zeViki Elingcwele nezinsuku zePhasika ezindaweni eziningi zaseSpain, ezinjenge ...
Iresiphi yamazambane abhakiwe. Kungamalungiselelo alula anika imiphumela emihle maqondana nokwethulwa nokunambitheka.
AmaNoodle amaShayina anemifino nenyama egayiwe
Iresiphi yamaShayina yama-noodle ngemifino nenyama egayiwe. Kungamalungiselelo alula asivumela ukuthi sivumelanise nesimo nabantu abadla inyama. Yindlela ethandekayo yokudla kwase-Asia.
I-Asparagus eluhlaza ne-Sauce Ebomvu ye-Garlic
Imifino kufanele ibe yingxenye yokudla kwethu futhi ukuze izwakale kangcono kumele size nezinongo ezintsha esizithandayo. I-asparagus eluhlaza nge-red garlic sauce iresiphi elula futhi enhle.
Iresiphi ye-carrot chips, kulula futhi iyashesha ukwenza. Ibuye inikeze isidlo esisha kuzindlela zethu zokupheka zokudla. Phawula ukuthi kungenziwa nokunye ukudla.
ICrosto: I-Puff Pastry Timbale eneMacaroni
Iresiphi yemvelaphi yase-Italiya ehlanganisa i-puff pastry, i-pasta kanye nezithako ezahlukahlukene. Izithako ezihlanganiswe ne-macaroni zingahluka, kuya ngomcabango noma ukunambitheka ngakunye.
UBanana Skewer no-Iberan Ham
Iresiphi yepincho esekwe kubhanana neham yase-Iberia. Ilula futhi iyashesha, futhi inelukuluku, into efunwa kakhulu ekhishini.
I-Pizza Yenyama Encibilikisiwe
Iresiphi elula ye-pizza enenyama egayiwe ebabayo. Kuyindlela engcono yokujabulela i-pizza, uyenze ngayinye ngendlela oyithandayo.
Iresiphi kanogwaja enezimfanzi, elula futhi esheshayo ukwenza. Ama-prawn avutha ukuze anambitheke kangcono nge-cognac. Unogwaja uyinyama enempilo okufanele idliwe, ngenxa yamafutha ayo aphansi, inqobo nje uma ingaphekwa ngokweqile.
Ikhaya lenze amabhola enyama
Iresiphi yenyama yenyama, manje ingahlanganiswa nezinye izithako noma inambitheke kanjena. Kulula ukwenza futhi kungenziwa ngezinhlobo ezahlukahlukene zenyama.
Iresiphi yekhekhe lesiponji.
Ngokuqinisekile usuyayazi iresiphi yekhekhe le-yogurt. Kulula, kulula futhi kuyathandeka. Yebo, ukuyenza into "ehlukile", sengeze ...
I-Sautéed Wild Asparagus, Amakhowe kanye ne-Garlic Encane
Iresiphi esetshenzisiwe ye-asparagus yasendle, amakhowe negalikhi. Ihlanganisa umbala nokunambitheka endaweni ebabazekayo enempilo. Futhi singakuguqula ngokuthanda kwethu.
Iresiphi yemifino: i-zucchini, isitshalo seqanda. Kulula ukwenza futhi okumnandi ukunambitha. Kuyindlela ekhethekile yokwethula imifino ezinganeni.
I-turnips ecebile futhi elula ethosiwe, indlela elula yokunikeza imifino kwabancane endlini. Futhi, ngokuma okufana namafriji aseFrance, kulula "ukufihla".
Iresiphi elula yokulungiselela ama-crepes.
I-pasta crepes elula kakhulu esekwe kufulawa namaqanda nobisi okuvumela inhlanganisela eyinkulungwane emnandi futhi enamanzi ngokuya ...
Puff khekhe kanye ukhilimu millefeuille
Okwanamuhla siphakamisa i-dessert emnandi kakhulu. Izinga lobunzima; Isikhathi sokulungiselela esilula: imizuzu engu-15 + 30m yokupheka ...
Unogwaja onososo lwaseRomco
Iresiphi kanogwaja ku-romesco sauce, elula futhi esheshayo ukuyilungisa. I-sauce ingenziwa ekhaya noma ithengwe. Izithako yi-sauce nomvundla.
Izibuko Puff khekhe
Iresiphi elula yezingilazi noma izintende zesundu. Isithako siyi-puff pastry futhi mhlawumbe ushukela omncane. Ungangeza ezinye izithako ezifana noshokoledi ukuzimboza bese ubanika ukuthinta okwehlukile.
Kunezinguqulo eziningana zemvelaphi ye-pasta, enye yazo ukuthi uMarco Polo lapho ebuya ohambweni lwakhe ...
irayisi iresiphi enemifino ne-soy sauce, ukuthinta okuhlukile kokudla okumnandi okuhlukahlukene kakhulu. Udinga nje ukucabanga kanye nesifiso.
Ubhontshisi obanzi waseCatalonia
Ukudla okwejwayelekile kwesiCatalan, okususelwa kubhontshisi, i-chorizo, isoseji emnyama, izimbambo zengulube neminti ukugwema ukumuncwa okujwayelekile kwalolu hlobo lwemifino
ITurkey yagcwalisa ama-aergergine
Iresiphi elula ongayivumelanisa nokuthanda kwakho. Lezi zinhlayiya ezifakiwe zamukela inhlanganisela eyinkulungwane, ngingeze okuncane ...
Ama-artichokes anamakhowe namaqanda ezigwaca
Ama-artichokes alungele ukunakekela isibindi nenyongo, angaphekwa ngezindlela eziyinkulungwane ezahlukene. Kusukela…